FAQ - IFORCE INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD
Kitapo kitapo tenona PP
Kitapo fanontam-pirinty BOPP (A)
BOPP Pirinty kitapo fanontana (B)
Leno harato harato
PP Raschel Kitapo tsipika
PP Soatoavina kitapo soatoavina
Kitapo valizy ambany ambany PP
Masinina amin'ny antsipiriany
Q1.Ny masinina iza no azonao omena?
A: Afaka mamatsy milina fanaovana kitapo kitapo PP isan-karazany isika, toa ny Flat Yarn Extruder, Cam Winding Machine, Machine boribory boribory, milina fanontam-pirinty BOPP, milina fanamainana, milina fanosotra mandeha ho azy, milina fanamafisam-peo ultrasonika, milina fanosotra, fanadiovana bobin-kofehy bobbin Masinina, Crusher plastika, Granulator mihodina, milina fanodinana automatique & milina fanjairana, milina fanodinam-bokatra & fanontam-pirinty, fanapahana automatique & fanjairana & fantsom-pifangaroana miendrika mafana, fanjairana mandeha ho azy & fanontana vita pirinty, famonoana mandeha ho azy & fanjairana & fanontana milina mifangaro, fanapahana ho azy & ampidirina & Manjaitra milina mifangaro sy milina fanaovana pirinty an'ny kitapo sns ..
F2.Manome andalana famokarana ve ianao?
A: Mazava ho azy, mifototra amin'ny masinantsika rehetra, afaka manome ny làlan'ny famokarana iray manontolo izahay, ohatra, ny tsipika famokarana kitapo PP, ny tsipika famokarana kitapo BOPP, ny tsipika famokarana soatoavina ara-dalàna PP, ny tsipika famokarana kitapo ambany ambany PP, harato kitapo, kitapo Leno, tsipika famokarana kitapo Raschel ary tsipika famokarana soatoavina Kraft sns ..
F3.Misy andro firy azonao atao ny mamita milina raha toa ka mametraka baiko izahay?
A: Matetika dia mitaky 25-30 andro ny famitana ny masinina hatramin'ny andro nametrahanay.
F4.Manahy ny amin'ny serivisy aorianay izahay, afaka manome torohevitra anay ve ianao?
A: Manome serivisy aorian'ny varotra feno izahay, ao anatin'izany ny fandefasana ireo injenieranay any amin'ny toeranao ho an'ny fametrahana & fanesorana, fiofanana ara-teknika, fitsapana ny fanekena farany sns. Na dia eo aza ny fotoana fiantohana, dia mbola afaka manome torolàlana ara-teknika amin'ny alàlan'ny vidéo an-tserasera sy ny serivisy fampidirana accessories.
Q.5 Tianay ny ho mpandraharaha na mpizara anao, azo atao ve izany?
A: Izahay dia mitady agents na distributor erak'izao tontolo izao. Raha ao amin'ity orinasa ity ianao ary liana amin'izany, aza misalasala mifandray aminay, pls.
F6.Ny vidin'ny milina vaovao dia avo loatra, te-hividy milina fanaovana kitapo PP vita tanana / faharoa izahay?
A: Izahay koa dia manome masinina vita kitapo vita tanana / tànana faharoa manao milina, pls mitandrina ny sehatry ny masinina efa niasa, hitazomana hatrany ireo milina fanavaozana.
F7. Tianay ny mitsidika ny orinasa misy anao, mora aminao ve izany?
A: Miarahaba ny namana eran'izao tontolo izao izahay ho an'ny orinasanay hitsidika amin'ny fotoana rehetra, raha te hahita ny vokatray ianareo dia mankanesa aty, pls.
NO.5 Jibei Industrial Park, Jiyang County, Jinan, Shandong, Sina